Bara keessa jiru, kuma lamaa fi kudha-toorba keessa, biyyoota Addunyaa irra jiran soddomaa ol keessatti filannoon prezidaantummaa geggeessama. Akkuma filannoo prezidaantummaa Yunaayitid Isteets kan ilaalchi itti kennamee ture – filannoon prezidaantummaa Faransaay torban dabre, guyyaa Dilbataa geggeessame kanneen keessaa tokko. Filannoo Prezidaantummaa Faransaay ka bara kanaa ka biyyoota biraa kan adda godhee qalbii uummata Addunyaa hawate, paartii biyyattii mirga leellisuu fi sab-boonummaatti cichu irraa ka dorgommichatti hirmaatan – Maariin Leppeen yoo filataman, Faransaayiin Gamtaa Awurooppaa keessaa baasanii gamticha diigu jedhamee dubbatamuu isaa ture. Kana malees, Mariin Leeppeen baqattootaaf ilaalcha gaarii akka hin qabne tu himama.
Garuu, kan ilaalcha siyaasaa giddu-galeessa qaban – Imaanu’eel injifatanii, yaaddoo sanatti xumura godhan.
Ogeessa Baankii fi ministara dinagdee ka turan – Maakroon, kan ilaalcha siyaasaa gama bitaas tahe gama mirgaa hin leellisne – Paartii “Aan Maarshee” jedhamu bara 2016 dabre kana hundeessanii, Prezidaantummaa Faransaayiif ddorgommiitti seenan.
Maakroon, ilaalcha Leeppeen qaban irraa faallaatti, hidhata Faransaay Gamtaa Awurooppaa waliin qabdu jabeessuu fi biyyoota godinaa “Yuroo” keessa jiran gidduutti hariiroo jabeessuuf nama fedhii qabani. Namni kun ammaan dura dorgommii siyaasaatti hin hirmaatiin malee, jalqabuma irraa ga’umsa siyaasaa agarsiisanii jiran.
Ka dorgommii Prezidaantummaa sana injifataman – Mariin Leeppeen, silaa otuu injifatan tahee,
- Faransaayiin Gamtaa Awurooppaa irraa adda-baasuu fi maallaqa “Yuurootiin” fayyadamuu dhaabsisuuf akka sagaleen hiree-murteeffannaa kennamu taasisuu.
- Masjiidawwan fiinxaaleyyii Musliimaa biyyattii keessaa cufuu,
- Baqattoota seeraa-alaa kanneen jedhaman guutummaatti biyyattii keessaa baasuu fi
- Mi’awwan daldalaaf biyyattii galfaman irratti dilaala dhibba irraa harka 35 muruu – kanneen jedhanii fi ka birootti fuuleffatan.
Walumaa-galatti yeroo ammaa kana Addunyaa irratti, paartiileen ilaalcha siyaasaa gama mirgaa leellisan, kanneen “Conservatives” jedhaman – filannoolee geggeessaman keessatti hedduu mul’ataa jiran. Fakkeenyaaf as Yunaayitid keesssatti, dorgommicha injifatanii – Prezidaant Doonaald Traamp taayitaa qabatanii jiran. Briteen keessa sochii safuutti cichitootaa yokaan sab-bbontotaa guddaa tu jira. Faransaay keessattis akkuman armaa olitti dubbadhe – ka paartii mirgaa leellistootaa irraa ta’an Mariin Leppeen, injifachuu baatan iyyuu rifaatuu guddaa uumanii turan. Kana maal tu fide? Gareen sabbonummaatti cichanii fi mirgaa leellisan kun akkamitti cimanii mul’achuu jalqaban.
As Yunaayitid Isteets, kutaa Verjiiniyaa ka jiru – Gloobaal Yunivarsitiitti, hayyuu falaasama siyaasaa fi barsiisaa ka tahan – Dr. Alamaayyoo Birruu telefoonaan gaafadheen jira.
Ripaablikii Afrikaa Waaltaa Keessatti Humnootiin Imala Nagaa Egsiisuu Irratti Bobbaafaman Ajjefaman